maung day | လမ်းအိုလေး | Page 2
Rodrigo Gudiño ၏ The Last Will and Testament of Rosalind Leigh (မောင်ဒေး)
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖတ်မယ်ဆိုရင် ကဗျာကိုပဲ တွေ့ရမှာပါ၊ မောင်ဒေးရဲ့ ရုပ်ရှင်ကဗျာကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းက ဒီကဗျာတွေကိုက ရုပ်ရှင်ကဗျာ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ပါပဲ ။ ဒီတော့ကာ မောင်ဒေး ဒိုင်ယာလေ့ာခ်လုပ်ထား၊ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ကဗျာရဲ့ အစိတ်အပိုင်း​တစ်ရပ်ကိုသာလျင် စူးစမ်းမိမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ ရုပ်ရှင်ကဗျာလို့ ဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲ စာဖတ်သူဟာ မောင်ဒေးရဲ့ ကဗျာတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လုပ်ပြီး ဖတ်ဖို့လိုမယ်။ ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဘယ်အရာနဲ့ ဘယ်ကိုယ်စားပြုမှု ပုံစံနဲ့ ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကတော့ အသေမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ်စားပြုနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ဒိုင်ယာလေ့ာခ်​လုပ်နေခြင်း​လို့သာလျင် ဆိုရမယ်။ စာဖတ်သူဟာ မောင်ဒေးရဲ့ ရုပ်ရှင်ကဗျာတွေကို သူ့ချည်းသက်သက် ဖတ်လို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သိကြသည်။ ကနေ့ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော အဖိုးနည်းအိမ်ရာ
သည် အပြင်ကကြည့်လျှင်ပို၍လှသည်။ ရေပိုက်ခေါင်းကိုပိတ်ဖို့ မေ့ခဲ့လျှင်
ဆူနာမီလာမည်။ ထမင်းစားပွဲပေါ်မှဇွန်းပြုတ်ကျလျင် ယောက်ျားတစ်ယောက်
ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ခက်ရင်းပြုတ်ကျလျှင် မိန်းမတစ်ယောက်ရောက်
လာမည်။ ဓါးပြုတ်ကျခဲ့သော် လူမဟုတ်သောသတ္တဝါတစ်ကောင်
ရောက်လာမည်။ သက်တံကိုမြင်ချင်လျှင် မိုးရွာတာကိုသည်းခံဖို့လိုသည်
ဟူသောစကားသည် ကလေးတို့အတွက် အလုပ်ဖြစ်သော်လည်း
လူကြီးတို့အဖို့မူ မကောင်းမှု၏ရှိနေခြင်းကိုသိဖို့ရာ စစ်ပွဲတွင်သေရသော၊
မနေ့ကအထိရှိနေသေးသောကမ္ဘာသည် လူအများကြားတွင် တိုးဝှေ့ထိုင်
လိုက်ပြီး လက်ဖက်ရည်ကိုတစ်ကျိုက်မော့လိုက်သည်။ လက်ခုပ်တီးလျှင်
တောထဲမှကျားလာမည်။ ရေပိုက်ခေါင်းကိုပိတ်ဖို့မေ့ခဲ့လျှင် ဆူနာမီလာမည်။
(Source: Maung Day Blog)
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ဒေး, Kabyarz, lanolay, maung day, movie poems | Permalink.
James Cameron ၏ Titanic (မောင်ဒေး)
ညသည် မည်း၍ ကြယ်များလက်နေသည်။
လီယိုသည် သူ၏ပုံဆွဲစာအုပ်လေးကိုထုတ်၍ ကိတ်၏ပုံကို
စကတ်ခ်ျလိုက်သည်။ ရေထဲကို ကျွန်တော် ခြေတစ်ဖက်ချသည်။
နောက်တစ်ဖက်ချသည်။ ရေသူမတစ်ယောက်က ကျောက်ဆောင်ကို
ကွယ်၍ ကျွန်တော့်ကို ချောင်းကြည့်၏။ သူ့ကို ကျွန်တော့်ကင်မရာနှင့်
ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်သည်။ သင်္ဘောက လှုပ်လာသည်၊
ဖန်ခွက်တွေ ကျကွဲသည်၊ ဘွိုင်လာမှ ရေတွေလျှံကျလာသည်၊
အင်ဂျင်ပေါက်ကွဲသံကို ကြားရ၏။ တို့တတွေဟာ
သင်္ဘောမမြုပ်ခင်ကတည်းက သေခဲ့ပြီးသားပါဟု ကပ္ပတိန်ကပြောသည်။
ရေသူမလေးကို ထပ်၍မြင်ရနိုးနှင့် ကျွန်တော်ရှာဖွေသည်။ မတွေ့။
သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတော့ ကျွန်တော်ရလိုက်သည်။
(ခေတ်ပြိုင်ကဗျာများ – ၆၀း၁၅း၀၃ဝ – စိတ်ကူးချိုချို)
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ဒေး, Kabyarz, lanolay, maung day, movie poems, SKCC 60:14 | Permalink.
Spike Jonze ၏ Her (မောင်ဒေး)
ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော်၏တရုတ်နိုင်ငံလုပ် စမတ်ဖုန်းတို့
ချစ်မိလျှင် ပို၍ပိုင်ဆိုင်ချင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မိလျှင် ပို၍ချစ်ချင်သည်။
လောကကြီးသည် ဖြေရခက်သော မေးခွန်းများနှင့်ပြည့်နေ၏။
သို့ပေမယ့် ထိုမေးခွန်းတို့၏အဖြေကို ကျွန်တော်မသိချင်ပါ။
သိလိုစိတ်သည် ပညာတတ်တို့၏ ဘိန်းဖြစ်သည်။
ဒီနှစ် သူမလာနိုင်ဟုဆို၏။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါ။
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ဒေး, Kabyarz, maung day, movie poems | Permalink.
Yojiro Takita ၏ Departures (မောင်ဒေး)
လက်မကြီးတစ်ခုသည် ဓါတ်ပုံပေါ်မှ မိသားစုဝင်တို့၏မျက်နှာကို
အကြိမ်ကြိမ်ပွတ်၍ ဖျက်၏။ အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ခဲ့သူကော၊
မှန်ထဲ၌သာ အသက်ရှင်ခဲ့သူပါ နောက်ဆုံးတွင်သေကြရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ သေသူ၏အုတ်ဂူကို မလေးမစားမပြုလုပ်အပ်ပါ။
David Fincher ၏ Fight Club (မောင်ဒေး)
တစ်မြို့လုံးရှိ မီးလုံးများ၊ မီးချောင်းများ တစ်ခုချင်းစီ
ပိတ်သွားသည်။ ဘဝကိုငြီးငွေ့နေသူ လူငယ်တို့သည်
ကန်ထဲမှငါးတို့ကိုဖမ်းကာ ကန်ပေါင်ပေါ်၌ပင် ကင်စားလိုက်ကြသည်။
ဘေးချင်းကပ်မြို့တွင် မီးများလင်းနေပြီး ၄င်းကို “ကြတ်ကုန်း”ဟုခေါ်သည်။
အမှောင်ကိုကြောက်သူတို့သည် အမှောင်ထဲတွင် လေချွန်တတ်ကြသည်။
မိန်းမများထဲတွင် ကြိုက်ကုန်းများက အလှဆုံးဖြစ်၏။
မြင်ကွင်းများထဲတွင် မီးလောင်နေသောပွဲဈေးတန်းက အလှဆုံးဖြစ်၏။
ဤကဗျာသည် အင်တာနက်လို၊ မူးယစ်ဆေးဝါးလို၊ ကော်ဖီနှင့်စီးကရက်လို
ကောင်းကင်ဘုံ … လာလမ်းအတိုင်း (မောင်ဒေး)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီညက အခင်းဖြစ်ပွားရာဆီရောက်တော့
ကောင်းကင်ဘုံက သေနှင့်ပြီ၊၊ ဓားတန်းလန်းနဲ့
ဓားနဲ့လှီးပြီး စားပစ်လိုက်ကြပါရောလား။ Continue reading →
Categories: Experimental, Kabyarz | Tags: မောင်ဒေး, Kabyarz, maung day, the-pleasure-sea | Permalink.
သမိုင်းသင်ရိုးထဲက ဆင်ဖိုနီ (မောင်ဒေး)
ဒါက ခေတ်ပေါ်သမိုင်း၊ ဒါက ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်း
ဒါက ဓားတစ်လက် အခြားဓားတစ်လက်ထဲ ဝင်ရောက်သွားဟန်
ဒါက သူရဲကောင်းတစ်ယောက် မြင်းတစ်ကောင်
ဒါက မဖြစ်ရသေးတဲ့စစ်တွေ မပစ်ရသေးတဲ့မြှားတွေ Continue reading →
ဓနိယနွားကျောင်းသား ဆို၏ (မောင်ဒေး)
ဟယ်လို…ငရဲဘုံ၊ ဒုက္ခထူပြောသည့်အရပ် ပရမ်းပတာ
သိုးဟာအီကနဲအော်ပြီး လည်ပင်းပြတ်ကျသွားတယ် Continue reading →